शेयर बजारका लगानि कर्ताहरुका लागी जरुरि सुचना - UjyaloNepal
२०७८ असार ३१ गते, बिहीबार प्रकाशित
एक वर्षमै सतप्रतिशत भन्दा धेरैले बढेको आकर्षण बढेसँगै हितः ग्राही खाता खोल्ने संख्या ४० लाख नजिक पुगिसकेको छ । यसै बीच धेरै वित्तीय संस्थाले असर मसान्त भित्र हितग्राही खाता नविकरण गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा डिम्याट खाता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। वार्षिक १ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाएपछि निक्षेप सदस्यहरुले यस्तो खाता नवीकरण गरिदिने गरेका छन्।
असर मसान्तभित्र आफ्नो खाता अनिवार्य नविकरण गर्नु पर्ने प्रावधान छ । नविकरणको लागि कार्यालयमा गएर वा अनलाइन बाट पनि रकम तिर्न सकिन्छ । बार्षिक १ सय रुपैयाँमा यो खाता नविकरण गर्न सकिन्छ ।
आफ्नो खाता सक्रिय राख्नको लागि खाता नविकरण गर्नु अनिवार्य छ । अहिले विभिन्न भुक्तानी प्रदायक कम्पनी बाट डिम्याट खाता नविकरण गर्न सकिन्छ ।
कम्पनीको शेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक एनआईबिएल एस क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। सो शेयर खरिदका लागि माछापुच्छ्रे बैंकको हिले, धनकुटा शाखा कार्यालय, नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सक्रान्ती, फेदाप, छथर, सिधुवा, साँगुरीगढी र राजारानी शाखा कार्यालय,
ग्लोबल आइएमई बैंकको जिरि खिम्ती शाखा, म्याङलुङ, तेह्रथुम र जलविद्युत आयोजना स्थल मेन्छ्यायेमा गाउँपालिका, तेह्रथुमबाट आवेदन दिन सकिनेछ।- आर्थिक संदेश
साउनको पहिलो हप्ता देखि नयाँ आईपीओ आउँदै,कुनको कति ?
युनियन लाइफको आइपीओ बाँडफाँट कहिले ?
नयाँ लगानीकर्ता मालामाल – असार महिना भित्र ३ कम्पनिको आइपीओ
२०७८ असार १८ गते, शुक्रबार प्रकाशित उज्यालो नेपाल 0
नेप्से परिसूचक मंगलबार हालसम्मकै उच्च विन्दुमा